Assad oo sheegay inuu aqbalay qorshaha nabada - BBC News Somali
Assad oo sheegay inuu aqbalay qorshaha nabada
Madaxweynaha Syria Bashar al Assad ayaa sheegay inuu aqbalay qorshaha nabada ee Koffi Annan, laakiin Mr Assad ayaa sheegay in kooxaha hubaysan ay joojiyaan falalka argagixisada ee ay ku hayaan dowladda.
Image caption Shirka Jaamacada Carabta ayaa markii ugu horaysay lagu qabtay Baqdaad tan iyo intuu Saddam Xussein uu xukunka ka degay
Maanta ugu yaraan labaatan qof ayaa lagu dilay dagaal.
Britain ayaa ku dhawaaqday inay siinayso toddobo boqol oo kun oo dollar oo dheeraad ah mucaaradka Syria.
Xoghayaha arimaha dibada ee Britain ayaa sheegay inay lacagta loogu tala galay taageero aan hub ahayn ee mucaaradka madaxweyne Asad.
Jaamacada Carabta oo ku shirtay Baqdaad maanta ayaa ku baaqday in la hirgaliyo qorshaha nabada ee ay qaramada Midoobay taageertay sida ugu dhaqsaha badan.
Qorshaha ayaa wuxuu ku baaqayaa in ciidamada in ciidamada ay ka baaxaan magaalooyinka, in loo daayo maxaabiista, in gargaar loo ogolaado dadka u baahan iyo in la ogolaado wariyayaasha inay wadanka si xor ah uga soo waramaan.